Furiinka - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Furiinka
Haddii adiga ama lamaanahaadu uu deegaan guri ku leeyahay Finland, waxaad si waafqsan sharciga Finland ku codsan kartaa furiin. Sidoo kale marxalado kale marka lagu jiro waxaad si waafaqsan sharciga Finland ku codsan kartaa furiin. Furiinka waxaa lagu qariray sharciga furiinka.
Furiinka mid ka mid ah lammaanaha ayaa kali ahaan u codsan kara ama lamaanuhu wadajir ayeey u codsan karaan. Kaligaa ayaad codsan kartaa furiinka haddii uusan xitaa lamaanahaado furiin doonayn.
Furiinka maxkamadda ayaa laga codsadaa. Maxkamaddu ma baarto sababta furiinka loo codsaday. Xiriirka lamaanaha u dhexeeya sidoo kale isna lama baaro.
Furiinka waa in lagu codsadaa codsi qoraal ah. Codsiga furiinka waxaad dhigan kartaa xafiiska maxkamadda degmadaada ama degmada lamaanahaada. Waxaad sidoo kale xafiiska maxkamadda codsiga boostada, telegraaamka ama emaylka. Codsiga furiinka waxaad ka heleysaa bogagga adeegga Suomi.fi.
Furiinka labo marxaladood ayaa lagu codsadaa. Marka hore waxaa la dhigtaa codsiga furiinka. Waqtiga ka fiirsashada kadib furiinka waa in marka kale la codsadaa. Furiinka waxaa la xukumaa codsiga labaad kadib. Furiinka waxaa la xukumayaa haddii uu xitaa lamaanaha kale ka soo horjeedo.
Sharciga guurkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Codsiga furiinka(pdf, 100 kb)Finnish | Iswidish
Codsashada furiinkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Waqtiga ka fiirsashada
Marka codsiga furiinka ee ugu horeeya la dhigo, waxaa billaabanaya lix bilood oo waqtiga ka fiirsashada ah. Waqtiga ka fiirsashadu waa qasab haddii aad cinwaanka ka duwan kan lamaanahaada aad labo sano deganayn.
Haddii lamaanahaada aad si wadajir furiinka ula codsaneyso, waqtiga ka fiirsashadu wuxuu billaabanayaa islamarka codsiga wadajirka ah uu maxkamadda soo gaaro.
Haddii lamaanaha kale uu kaliguus codsanayo furiin, waqtiga ka fiirsashadu wuxuu billaabanayaa marka lamaanaha kale la ogeysiiyo arrinta. Maxkamadda ayaa u xilsaaran in lamaanaha kale uu ka warhelo codsiga
Waqtiga ka fiirsashada kadib
Maxkamaddu waxay lamaanaha ku xukumeysaa furiin haddii:
lixda bilood ee waqtiga ka fiirsashadu uu dhamaado iyo
haddii lamaanaha midkood ama labadoodu ay doonayaan in furiin lagu xukumo
Doonista in maxkamaddu lamaanaha ku xukunto furiin waqtiga ka fiirsashada kadib waxaa loo sameeyaa si lamid ah sida codsigi koowaad oo kale.
Waa muhiim in la sameeyo doonista xukunka furiinka sanad gudihiis laga soo bilaabo marka uu waqtiga ka fiirsashadu bilowday. Haddii kale arrinta furiinku way laalmeysaa.
Furiinka aan laheyn waqtiga ka fiirsashada
Haddii adiga iyol amaanahaado aad labadii sano ee ugu dambeys aad si aan kala joogsi laheyn u kala deganaydeen labo cinwaan kahor codsashada furiinka, looma baahna waqtiga ka fiirsashada. Markaas maxkamaddu waxay islamarkiiba idinku xukumi kartaa furiin.
Heshiisiinta arrimaha qoyska
Marka aad ka fiirsaneyso furiin islamarkaasna aad caawimaad ugu baahantahay ka xaajooshada arrinta waxaad codsan kartaa heshiisiinta arrimaha qoyska (perheasioden sovittelu). Heshiisiinta waxaa inta badan laga faa'iidi karaa in arrimaha laga heshiin karo maxkamad la'aaan. Tusaale ahaan xaaladda ilmaha waxaa looga hadli karaa heshiisiinta.
Sida caadiga ah heshiisiiyayaashu waa shaqaalaha xafiisyada sooshaalka, rugaha latalinta barbaarinta iyo rgaha latalinta qoyska. Si kalsooni leh ayaa iyaga ula sheekeysan kartaa.
Xafiiska sooshaalka ee deegaankaada weydii sida heshiisiinta arrimaha qoyska looga qabanqaabiyo deegaankaada.
Macluumaad ku saabsan heshiisiinta arrimaha qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Kaalmada waqtiga furiinka
Dhibaatooyinka xiriirka lamaanaha waxaad caawimaad uga raadsan kartaa tusaale ahaan rugta latalinta qoyska ee deegaankaada ama rugta caafimaadka. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka guurka iyo xiriirka lamaanaha.
Marka lagu jiro xaalado dagaal faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dagaalka.
Ururo badan iyo kaniisado ayaa waxay kaalmooyiinka kooxaha waxqabadka u qabanqaabiyaan kuwa isfuray. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan bogagga xarumaha wadaxaajoodka arrimaha qoyska ee Kaniisadda iyo Ururka dadweynaha.
Bogagga Ururka Midowga Qoysaska Halka Waalid (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry) waxaad ka heleysaa macluumdyo iyo talooyin loogu talagalay waalidka ka fiirsanaya furiin.
Ururka Miessakit (Miessakit ry) wuxuu ku dadaalaa in uu sare u qaado hagaagsanaanta ragga isagoo u fidinaya kaalmooyinka dhinaca la qabsashada bulshada ah. Wuxuu ka shaqeeyaa ururku Helsinki, Tampere iyo Lahti. Macluumaad dheeraad ah oo ku qoran afafka Finnishka, Ingiriiska iyo Iswidishka waxaad ka heleysaa bogagga internteka.
Macluumaad ku saabsan la-talinta qoyska ee kaniisaddaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Caawimaad ragga loogu talagalayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Magaca qoyska marka la isfuro
Haddii guurkaadu uu furriin ku dhamaado, magaca qoysku ma beddelmo. Haddii aad dooneyso, waxaad qaadan kartaa magac qoys oo cusub. Waxaad tusaale ahaan qaadan kartaa magac qoys kasta oo aad horay u heysatay. U dir codsiga beddelista magaca qoyska xafiiska Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Furiinka iyo ogolaanshiyaha joogitaanka
Haddii aad heysato ogolaanshiyaha joogitaanka ee waqtigiisa cayiman yahay oo laguugu siiyay xiriir qoys darteed, fruiinku wuxuu saameyn ku yeelan karaa ogolaanshiyaha joogitaanka. Xaaladaha noocan oo kale ah marka lagu jiro waxaa marwalba laga fiirsadaa in la sii wadayo ogolaanshiyaha joogitaanka furiinka kadib iyo in lala laabanayo. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha.
Hantida iyo furiinka
Macluumaadka qeybinta hantida marka furiinka lagu jiro waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Hantida marka furiin la galo.
Carruurta iyo furiinka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan carruurta iyo furiinka waxaa laga helayaa bogga InfoFinlandi Caruurta waalidiintoodu is-fureen.